नेपालमा कोभिसिल्ड खोपलाई आपतकालीन प्रयोगको अनुमती, आउने र लगाउने कहिले ? – Mission Khabar
नेपालमा कोभिसिल्ड खोपलाई आपतकालीन प्रयोगको अनुमती, आउने र लगाउने कहिले ?
मिसन खबर ३ माघ २०७७, शनिबार १५:१९
काठमाडौं । नेपालमा समेत कोरोनाविरुद्धको ‘कोभिसिल्ड’ खोपलाई आपतकालीन प्रयोगको अनुमति दिइएको छ । औषधि व्यवस्था विभागले कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप ‘कोभिसिल्ड’लाई नेपालमा आपतकालिन प्रयोगको अनुमति दिएको हो ।
सेरम इनिस्च्युट अफ इण्डियाले उत्पादन गरेको खोपलाई आपतकालिन प्रयोगका लागि सशर्त अनुमति दिइएको विभागले जानकारी गराएको छ । ‘कोभिसिल्ड’, अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीले एस्ट्राजेनेकासँग मिलेर विकास गरिएको खोपको भारतीय संस्करण हो । विभागले दुई दिनअघि आपतकालिन अनुमतिका लागि प्रयोग गरिने खोप दर्ताका लागि आह्वान गरेको थियो । भारतमा आजदेखी यो खोप लगाउन थालिएको छ ।
औषधि व्यवस्था विभागले विज्ञप्ती जारी गर्दै भनेको छ, ‘नेपालमा कोभिड–१९ विरुद्धको खोपको आपतकालीन प्रयोगका लागि २०७७ माघ २ को विभागीय निर्णयानुसार उत्पादक सिरम इन्स्टिच्युट अफ इण्डिया प्रालिको कोभिशिल्ड खोप आपतकालीन प्रयोगका लागि सशर्त अनुमति प्रदान गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि अनुरोध छ ।’